I-East Nashville Writer's Retreat - I-Airbnb
I-East Nashville Writer's Retreat
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Robert
Ngo-375 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
Imvume ye-STRP #2017035549.
Siyakwamukela ku-hangout yami ethokomele. Leli khaya elibheke eningizimu libamba ilanga usuku lonke futhi liyakhanya futhi linomoya.
Ikhishi lisanda kulungiswa kabusha ngama-countertops amatshe nazo zonke izinto ezisetshenziswayo nezinto zokupheka ozidingayo.
Indlu yokugezela nayo isilungisiwe futhi ineshawa enamandla.
Isikhumulo sezindiza saseNashville singamakhilomitha angu-9 kuphela ukusuka lapha.
Ngenkathi ulapha, kungani ungatholi amajusi akho okudala ageleze futhi usebenzise upiyano lwami oludala olujabulisayo ukuze ngibe umbhali wengoma waseNashville futhi ngibhale ingoma yokuqala elandelayo.
Kunezindawo zokulala ezimbili: Igumbi lokulala elikhulu linombhede wesileyi wendlovukazi omude (ofanele indlovukazi) futhi linekhabethe elinama-hangers kanye nendawo yokugqoka/i-TV enamakhabethe ongawasebenzisa (indawo yokomisa izinwele ihlala ekhabetheni eliphezulu kwesokudla. ); Igumbi lokuphumula linombhede wosuku onomatilasi oyedwa kanye nombhede owodwa ogoqwayo ngaphansi.
Kukhona i-TV enkulu ekamelweni enezinhlelo zokusebenza zokusakaza-bukhoma ezimbalwa. Kukhona i-TV encane egumbini lokuhlala enezinhlelo zokusebenza zokusakaza-bukhoma kanye nesidlali se-DVD ne-VCR enamathiselwe, enokukhethwa okuncane kwamamuvi nezinhlelo ze-TV, ezinye zazo ezilungele izingane.
I-wifi ivutha ngokushesha.
I-wifi esheshayo – 375 Mbps
I-TV ene- Apple TV, I-Netflix, I-Amazon Prime Video, I-Roku
4.96 · 195 okushiwo abanye
Indlu isemgwaqweni wokuhlala ongasekho, kodwa uhamba imizuzu emi-3 ekhoneni futhi uzothola indawo yokudlela/amabha oseduze: I-Mas Tacos (imali/isheke/i-venmo kuphela) inemenyu elinganiselwe yokudla okusha okumnandi futhi ine muva nje wengeze izihlalo zangaphandle; Ikhemisi iyindawo edumile ye-burger kanye ne-brat enengadi kabhiya. Zombili lezi zindawo zidume kakhulu, ngakho-ke kungaba nokulinda isikhathi eside. Fika lapho kusenesikhathi ngesidlo sasemini noma sakusihlwa. Eduze kweThe Pharmacy kuneLyra ephakela ukudla kwaseMpumalanga Ephakathi. Angikakayizami okwamanje, kodwa abangani bangitshela ukuthi yinhle.
Elinye imayela elingu-3/4 futhi use-The 5 Spot, okuyindawo enhle yomculo ejabulisayo futhi esemaphethelweni omakhelwane odumile wase-East Nashville Wamaphuzu amahlanu lapho uzothola khona izindawo zokudlela eziningi, amabha, izikhungo zobuciko nezitolo zama-hip.
Uma ufuna ukudla kwasekuseni okuphekiwe okushibhile noma "inyama-nezintathu," i-Nashville Biscuit House ingamamitha angu-1/2 ukuya emgwaqweni. Ukudla kulula futhi kuyathengeka, futhi abasebenzi abalindile bajabule.
Kunezitolo ezintathu zokudla, i-Kroger ne-Aldi ngase-Biscuit house, kanye ne-Publix esenyakatho kancane ku-Gallatin Road.
Uma ufuna indawo emnandi yokudla kwasekuseni/yekhofi, zama i-Barista Parlor. Kukude kune-Aldi. Akushibhile, kodwa ikhwalithi yinhle. UMargot uyintandokazi yami yokudlela yase-East Nashville yokudlela, futhi ingenye yezindawo ezihamba phambili edolobheni. Akhiwe ngokuqondile Emaphoyintini angu-5, avula kusihlwa ngoLwesithathu kuze kube yiSonto, futhi anesidlo esimnandi ngoMgqibelo nangeSonto. Basanda kuqala ukuhlinzeka ngesidlo sasekuseni nesasemini ngoLwesithathu kuze kube uLwesihlanu.
I-Lower Broadway ingamakhilomitha angu-3 ukusuka lapha lapho yonke indawo yokuphuzela utshwala inomculo obukhoma, futhi abanye babaculi abahamba phambili emhlabeni badlalela amathiphu.
Futhi, ungaphuthelwa yi-Country Music Hall of Fame.
Uma usedolobheni ngeSonto ekuseni, ngincoma kakhulu ibhrantshi eCapitol Grille etholakala kumlando weHermitage Hotel ku-6th Ave. Enyakatho yedolobha. Ukudla nesevisi kuyikilasi lokuqala (bakuthola ukudla epulazini labo) futhi ukuhlobisa kuyathandeka. Okungcono nokho, lokhu kungenye yengcebo efihliwe yaseNashville, ngakho-ke akuvamile ukuba kube khona abantu abambalwa abadla lapho. Ngenkathi ulapho, hlola indlu yokugezela yabesilisa ye-Art Deco - besifazane, ngqongqothani ngaphambi kokuthi ningene ukuze nithathe isithombe. Lesi sakhiwo siphinde sibe ne-Oak Bar okuyindawo enhle ongaya kuyo kusihlwa ukwenza i-cocktail. Indawo yokwamukela izivakashi ehhotela nayo ikufanele ukubhekwa.
Yize useMusic City, zikhona ezinye izinto okumele uzenze. I-Frist Centre iyigalari yezobuciko enhle kakhulu, futhi kunezakhiwo ezithokozisayo ongazibona, ikakhulukazi i-Union Station ebuyiselwe kahle kanye ne-Parthenon e-Centennial Park.
Uma ungumuntu othanda umlando, i-Belle Meade Mansion ohlangothini olusentshonalanga yedolobha kufanelekile ukuvakashelwa, futhi i-Franklin, TN (amamayela angu-24 eningizimu) inezindawo ezithakazelisayo zempi yombango, kanye nezitolo ezinkulu nezindawo zokudlela.
Ngesikhathi sebhola iNissan Stadium - ikhaya leTennessee Titans - iqhele ngamamayela angu-2 kuphela. Ukupaka kungase kubize, kodwa ama-Uber/Lyfts maningi, futhi kulula ukuhamba. Ungathenga amathikithi ku-inthanethi, kodwa ungathola njalo abantu abathengisa amathikithi ngaphandle kwenkundla, futhi uma ulinda kuze kube ngemva kokuqala, amanani azokwehla.
Iqembu le-hockey le-Nashville Predators liphumelele ku-Stanley Cup ngo-2017. Ungababona bedlala maphakathi nedolobha e-Bridgestone Arena.
Futhi sineqembu eliqinile le-baseball yeligi encane ye-AAA: Imisindo idlala e-First Horizon Park, amamayela angu-2.5 ukusuka lapha.
Uma uthanda izindawo eziluhlaza, iShelby Park (cishe amamayela ayi-6) iyindawo ethandekayo yokuhamba ngezinyawo noma ukugibela ibhayisikili. Futhi banenkundla yegalofu eyizimbobo eziyi-18 enemali efanelekile eluhlaza.
Kusukela kwavela i-Covid-10, ngenxa yokuqapha okukhulu, ngikhethe ukukhawulela ukuxhumana kwami nezivakashi. Ukhiye ugcinwe ebhokisini lokukhiya, ukuze ukwazi ukuzihlola ukuthi ungene futhi uphume.